Ọzụzụ | October 2021
Isi > Ọzụzụ
isi ọzụzụ ụkpụrụ
Trainingkpụrụ ọzụzụ ọzụzụ - azịza nkịtị
Kedu usoro ụkpụrụ ọzụzụ 5? Iji nweta ihe kachasị na ọzụzụ gị, ịkwesịrị itinye ụkpụrụ isi ise nke ọzụzụ ọzụzụ, ịkọwapụta onwe onye, ​​mbugharị na-aga n'ihu, mgbanwe na ịmara mgbanwe.
pro ịgba ígwè ọzụzụ
Ọzụzụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè - azịza ohuru
Kedu ọzụzụ ndị na-eme ịnyịnya ígwè na-eme? Ọzụzụ dị elu dị elu (HIIT) bụ ngwa ọrụ nke ndị na-eme egwuregwu na ndị na-amu amu n'otu aka ahụ iji nweta ọtụtụ ihe na nkuzi ha mgbe ha na-eji usoro ọzụzụ esemokwu. Ebumnuche bụ ịlụ di na nwunye nke HIIT iji nwee usoro ọzụzụ ogologo dị ogologo iji bulie mmezi arụmọrụ gị.
kalori gbara ọzụzụ oge
Calories gbara ọkụ ọzụzụ oge - ngwọta na-adịgide adịgide
Kedu kalori ole ka ọzụzụ nkeji oge si ere ọkụ? N'ime nkeji iri abụọ nke usoro a, mmadụ nwere ike ịgba ọkụ n'etiti calorie 9-13 na nkeji. N'ime oge mgbatị ahụ HIIT, ọ ga-abụ na mmadụ ga-erekwu ọkụ karịa calorie 12-16 n'otu nkeji.
Peter sagan ọzụzụ
Peter sagan ọzụzụ - azịza ohuru
Oge awa ole ka Peter Sagan zụrụ? Sagan na - azụkọta ihe dị ka awa iri na itoolu kwa izu, karịa onye ọ bụla n’ime anyị na - agba ịnyịnya belụsọ ma anyị nọ n’ogige ọzụzụ ma ọ bụ na - agagharị. Akwadoghị nke a maka onye na-agba ịnyịnya na-amu amu, mana akụkụ ndị ọzọ nke ọzụzụ ntọala ya, ọkachasị maka ịbịaru oge nwere ike ịkụziri gị ihe.
iri ọzụzụ atụmatụ
Atụmatụ ọzụzụ ọzụzụ iri - ụzọ ndụ
Ogologo oge ole ka ị kwesịrị ịzụ maka ọsọ 10? N'ọnọdụ dị otú ahụ, ị ​​kwesịrị ikwe ka ọ dịkarịa ala ọnwa 6 ịzụ maka ịgba ọsọ 10. Izu 1: Tuesday: Gbaa ọsọ maka 30 nkeji. Tinyegharịa otu ugboro ọzọ n'izu ka ụbọchị izu ike dị n'etiti ọzụzụ ụbọchị ọ bụla. Na Sọnde gaa maka ọsọ 2 na-aga n'ihu na-edetu oge gị na njedebe.
ọzụzụ ntụpọ ụtọ
Spottọ ntụpọ ọzụzụ - esi eme ihe
Gịnị bụ ụtọ ntụpọ ọzụzụ? Ọzụzụ dị ụtọ dị egwu bụ ike na olu dị elu nke na-eme ka ikike mbido arụmọrụ nke onye na-agba ọsọ (FTP) ma melite ntachi obi. N'etiti usoro ndị a, ndị egwuregwu ga - eme ka ha nwee nnukwu nsogbu nrụgide (TSS), mee ka Ibu Ogologo Ọzụzụ (CTL) dịkwuo elu ma n'otu oge ahụ na-abawanye ike.
atụmatụ ọzụzụ zuru oke
Atụmatụ ọzụzụ Sufferfest - azịza ya
Kedụ ka ị si eme atụmatụ ọzụzụ Sufferfest? Họrọ ma Jikwaa Atụmatụ Ọzụzụ Gị Kpọmkwem na The App Iji malite, banye na ngwa ahụ, họrọ ịdọ aka ná ntị gị gụnyere okporo ụzọ, triathlon, cyclocross, gravel, XC MTB, na eSportsadd nhọrọ yoga, ike ma ọ bụ ike uche, wee soro ọganihu gị ozugbo n'ime ngwa SUF.
50 kilomita ịnya igwe kwụ otu ebe enweghị ọzụzụ
50 kilomita ịnyịnya ígwè enweghị ọzụzụ - otu esi emeso
Ogologo oge ole ka ịgba ịnyịnya ígwè 50 kilomita kwesịrị ịdị? ihe dị ka awa atọ na nkeji iri atọ
pola ọzụzụ ibu
Pola ọzụzụ ibu - keukwu akwụkwọ
Gịnị bụ ibu ọzụzụ pola?
isii izu 10k ọzụzụ atụmatụ
Izu isii ọzụzụ ọzụzụ 10k - otu esi edozi
Nwere ike ịzụ maka 10K na izu 7? N'ihi na, ọ bụrụ na ị nwere ike iji obi ụtọ na-agba ọsọ 5k na-abụghị nkwụsị ma na-azụ ọzụzụ mgbe niile ma ọ dịkarịa ala izu isii, mgbe ahụ ị zuru oke iji bido ịrụ ọrụ maka 10k. Na, site na usoro ọzụzụ ọzụzụ a, ị ga-enwe ike ịgba ọsọ 10k PB naanị izu asaa, ọ dị mma.
ile anya maka ọzụzụ oge
Lelee maka ọzụzụ oge - otu esi enweta
Ndi Apple Watch nwere ike imuta oge obula? Hapụ ekwentị gị n'ụlọ. Soro Apple Watch gị rụọ ọrụ. Oge etiti oge nche ga - esochi obi obi gị, calorie, ebe dị anya, ijeụkwụ, yana ụzọ mgbatị ahụ. Ihe mgbaàmà nke ndị na-eme ka mgbaaka na-enweta nkwojiaka gị ma na-enyekwa mkpọtụ ọdịyo maka ịgụta oge gafere.
1 45 ọkara marathon ọzụzụ
1 45 ọkara marathon ọzụzụ - ajụjụ nkịtị
Kedu ọsọ bụ 1 marathon ọkara nke ọkara? 08:00 kwa kilomita
karịa bufee ọzụzụ
Ọzụzụ kachasị elu - otu esi ekpebi
Kedu ihe bụ ọzụzụ Max-OT?
akụrụngwa ọzụzụ nkeji oge
Ngwa ọzụzụ oge - ihe ngwọta ga-ekwe omume
Kedu akụrụngwa dị mkpa maka ọzụzụ etiti oge? Oge Ngwunye Ọzụzụ I kwesịkwara ịtụle iji igwe na-akwụ ụgwọ na ndị na-eguzogide ọgwụ iji gbakwunye ọzụzụ ike n'oge nkeji oge gị ma mee ka ike gị dịkwuo elu. Banddọ mgbochi na-aba uru iji ụkwụ gị mee ihe, yana igwe anaghị akwụ ụgwọ dị mma maka mmega ahụ dị n'elu. Enwere ike iji ha n'otu oge.
Atụmatụ ọzụzụ Zwift - azịza na-adịgide adịgide
Atụmatụ ọzụzụ Zwift ọ dị mma ọ bụla? Ọ bụ ezie na Zwift dị mma maka ịwụ elu na onye na-enye ọzụzụ na ịnyagharị n'efu maka ọchị, ọ bụkwa ngwa ọrụ ọzụzụ dị ike nke nwere ọtụtụ mgbatị na atụmatụ ọzụzụ iji nyere gị aka mee ka ahụike gị nwee ọkwa ọzọ. Ozugbo inwetara ihe ndozi Zwift gị, ihe ị ga - eme bụ ịwụli elu na pedal.
Ọzụzụ Plateau - ihe ngwọta bara uru
Gịnị bụ ugwu ọzụzụ? Gịnị bụ Ọzụzụ Plateau? Mgbe etinyere ya na mmemme mgbatị ahụ, okwu ahụ a na-akpọ plateau na-ezo aka na mberede na ida dị egwu na nsonaazụ a na-ahụ anya nke mgbatị gị oge niile. Nke a nwere ike igosipụta onwe ya na ike na ọzụzụ obi, yana kwa ọnwụ ọnwụ.
ọzụzụ ike maka ndị ọgba dvd
Ọzụzụ ike maka ndị ọgba ọsọ DVD - otu esi edozi
Kedu ihe bụ ọzụzụ kacha mma maka ndị ọgba ọsọ?
Oge ọzụzụ ikpe 40k
Usoro ọzụzụ ikpe oge 40k - azịza na ajụjụ
Kedụ ka m ga - esi gbalite oge nnwale oge m?
3 ụbọchị ọzụzụ
3 ụbọchị ọzụzụ - azịza ohuru
3bọchị atọ zuru iji rụ ọrụ? Ndị ọkachamara kwuru ka ha na-emega ahụ́ ma ọ dịkarịa ala ugboro atọ n’izu iji nwee ezigbo ahụ́ ike. Ọtụtụ ndị na-ahọrọ mgbatị ahụ karịa ụbọchị ole na ole akwadoro, mana ndị na-arụsi ọrụ ike ekwesịghị inwe obi amamikpe maka ịme naanị ụbọchị atọ n'izu.
n'etiti ọzụzụ 10k
Usoro ọzụzụ 10k dị n'etiti - otu esi edozi
Nwere ike ịzụ maka 10K na izu 4? Ọ bụrụ na ị debanyere aha maka ịgba ọsọ 10K (kilomita 6.2) ma ịmalitebeghị ọzụzụ, ị ka nwere ike ịbanye n'ụdị ịgba ọsọ ma ọ bụrụ na itinye uche gị na ya. Site na iguzobe usoro ihe omume nke site n’inwe mmemme na izu ike oge obula enwere ike ibu ndi gbara ọsọ dika obere izu 4.